Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyay in Kuraasta Haweenka ay ku fadhiyaan loo gaar yeello – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa maanta shir-guddoomiyay kulankii 5-aad ee Kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka, kaas oo ajandihiisu uu ahaa dhammeystirka doodii ku saabsaneyd xeerka qoondada haweenka.
143 mudane oo soo xaadirtay kulankii maanta ayaa mesheedii ka sidii waday doodii shalay, waxaana markii dambe cod loo qaaday mooshin shalay ay soo gudbiyeen xildhibaannada haweenka ah ee ku jira Baarlamaanka, kaas oo ay ku dalbanayeen in kuraasta ay ku fadhiyaan loo gaar yeello, oo aan lagu darin kuwa ragga.
134 Xildhibaan ayaa ansixiyay in Haweenka kuraastooda loo gaar yeello oo aan lagu darin ragga, halka illaa 10 Xildhibaan ay diiday. Sidaasi ayuuna ku ansaxay mooshinkii la keennay golaha, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xeerka qoondada Haweenka, mataalada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare, arrinta Gobolada Waqooyi iyo deegaameynta Kuraasta, waxaa ay ahaayeen afar xeer oo dhawaan ay soo gudbiyeen Guddigii wada-jirka ee dhammeystirka xeerarka doorashooyinka Qaranka.
Xildhibaan Canab oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay hadda ku leeyihiin Baarlamaanka 24 kursi, 6-da ka maqanna ay heli doonnaan. Waxaa ay kula dar-daarantay in 24-ka kursi ee hadda ku jira baarlamaanka aysan gadaal u noqon, oo ay horay u socdaan.